गच्छदारमाथि छायो खतरा, पक्राउ पर्न सक्ने ! - Gaunbeshi
गच्छदारमाथि छायो खतरा, पक्राउ पर्न सक्ने !
Posted on २४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०९:३५ Author punam punma Comment(0)
उनीसँगै म्याद जारी भएका अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात विशेष अदालतको आदेशमा कारागार चलान भइसकेका छन् । उनले अब अदालतमा उपस्थित नहुनुको कारण पेस गर्न नसकेमा विशेष अदालतले थुनछेक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
Posted on २४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १७:५९ Author Gaunbeshi
एजेन्सी । अहिले नेपालमा कोरोनाको प्रभावका कारण माक्सको अभाव छ । पसलमा माक्स किन्न पनि पाइदैन । ब्यापारीहरुले भएका माक्स पनि महंगो मुल्यमा बेच्न थालेका छन् । तर कोरोनाभाइरसले विश्व नै प्रभावित भइरहेको समयमा भारतको उत्तर प्रदेश राज्यस्थित वाराणसीमा भने अचम्मको घटना भएको छ । मन्दिरका पुजारीले भगवानको मूर्तिमा पनि मास्क लगाइदिएका छन् । उनमा […]
Posted on १७ चैत्र २०७७, मंगलवार ०९:४६ Author punam punma
त्रिदेशीय कप फुटबलको उपाधि नेपालले जितेको छ । फाइनल खेलमा नेपाल बङगलादेशलाई २, १ गोलअन्तरगतले पराजित गरेको हो । नेपालले दुुवै गोल पहिला हाफमा गरेको हो । नेपालका लागि सन्जोग राई र विशाल राईले ु गर्नुभएको हो । नेपालले ३७ वर्षपछि घरेलुु मैदानमा उपाधिसँगै नेपालले पाँचहजार डलर पुुस्कार प्राप्त गर्यौ भने उपविजेता बङगलादेशले तीन हजार […]
भक्तपुर : क्षेत्र नं २ का संघीय सांसद एवं पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले यस वर्षको दशैं भत्तावापतको रकम भक्तपुर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेका छन्। अस्पतालमा सेवा लिन आउने गरिब, विपन्न र असहाय बिरामीको उपचारका लागि खर्च गर्ने गरी आज उनले सो रकम दिएका हुन्। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले अस्पताल पुगेर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष मिलन सुवाल र मेडिकल […]
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक युवतीको निधन
Posted on १५ माघ २०७७, बिहीबार ११:२६ Author Gaunbeshi
आमिर खानकी छोरी इराले जबको लागि भ्याक्यान्सि खोलिन यति धेरै तलबमा
Posted on ८ चैत्र २०७७, आईतवार १७:५२ Author punam punma
पाथिभरा माताको दर्शन गरि माघ ३० गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुस्
Posted on ३० माघ २०७७, शुक्रबार ०६:०८ Author Gaunbeshi
Posted on ११ माघ २०७७, आईतवार १४:४४ Author Gaunbeshi